Izizathu zokuba kutheni ifowuni yakho ye-Android ishushu | I-Androidsis
Kuqhelekile ukuba ifowuni ye-Android ishushu ngamaxesha athile okusetyenziswa. Nangona kukho iimeko apho oku kunyuka kwamaqondo obushushu kufikelela kumanqanaba agqithisileyo, anokubangela iingxaki kwifowuni. Kule meko yetyala, imvelaphi apho itshisa khona inokwahluka. Ke ngoko, kulungile ukwazi ukuba yintoni enokubangela le ngxaki.
Ukusukela ukuba sinedatha enokuthi ibe yiyo Imvelaphi yeliqondo lobushushu ligqithisileyo kwifowuni yethu ye-Android, singathatha inyathelo ngayo. Emva koko sikushiya noonobangela abaphambili abavela kule ngxaki.
Yazi ukuba yeyiphi indawo yefowuni ebangela ubushushu obuphezulu kubalulekile xa ufuna izisombululo. Ukusukela ngokuxhomekeka kwimvelaphi, izisombululo zinokwahluka kakhulu. Sikushiya apha ngezantsi ngezona zinto zixhaphakileyo ezibangela ukwanda kweqondo lobushushu kwifowuni.
2 Ukusetyenziswa kwemidlalo okanye usetyenziso
3 Itshaja yefowuni
Esinye sezizathu eziqhelekileyo kukuba ibhetri onoxanduva lokufowunelwa kwefowuni yakho ye-Android. Ukuba siqaphela ukuba ngasemva yinxalenye yefowuni evutha ngokukhawuleza, sinokugqiba ukuba imvelaphi ikwibhetri. Kukho iifowuni apho sinokujonga khona ubushushu bebhetri usebenzisa iqhinga elilula, iimveliso ezinje ngeSamsung okanye i-LG ziyasivumela ukuba sizisebenzise.
Kufanele si Sebenzisa ikhowudi ye-USSD * # * # 4636 # * # * eya kusisa kwimenyu. Kule menyu kukho icandelo lolwazi malunga nebhetri, eya kusibonisa ubushushu bayo. Ngokwesiqhelo, ibhetri ineqondo lobushushu elimalunga ne-30 ° C, nangona ithe yagqitha ibingaba malunga ne-40 ° C. Kukho elinye icandelo elibizwa ngokuba yibhetri eliza kusixelela ukuba kukho iingxaki, ukuze sithathe amanyathelo kwaye sibone ukuba ingxaki iyaphela na.
Ukuba asinalo olu khetho, ikhona izicelo ezisivumela ukuba silawule ubushushu ifowuni kunye nebhetri. Ke siyilawula imeko yayo ngokuchaneka okukhulu.
Ukusetyenziswa kwemidlalo okanye usetyenziso
Imidlalo idla ngokutya izixhobo ezininzi kwifowuni yethu ye-Android. Ngesi sizathu, kwezinye iifowuni zihlala zibangela ukuba iqondo lobushushu elifanayo likhule kakhulu. Mhlawumbi uyiqaphele le yakho ngelinye ixesha. Ihlala ivela kwiifowuni ezilula, eziphakathi kunye nezisezantsi, kuba iifowuni eziphezulu zihlala zineprosesa enamandla ngakumbi.
Kwimeko apho oku kuyenzeka, into ekufuneka uyenzile yeka ukudlala. Ifowuni iya kubuya ngale ndlela kancinci kubushushu bayo obuqhelekileyo. Inokwenzeka nakwizicelo ezithile, ngakumbi ukuba zisebenzisa izixhobo ezininzi kwifowuni, okanye ukuba zininzi kakhulu izicelo ezisebenza ngasemva. Kodwa isisombululo sesona silula kuzo zonke.
Eyona ilungileyo Nciphisa inani lezicelo ezivulekileyo ngasemva. Kananjalo ukuba unamawijethi okanye imifanekiso eshukumayo. Kuba banokubangela oku kunyuka kwamaqondo obushushu.
Omnye unobangela oqhelekile kukuba Ingxaki yokufudumeza ifowuni ye-Android ivela kwitshaja. Ke ngoko, kufuneka sijonge ukuba oku kunyuka kwamaqondo obushushu kwenzeka ngakumbi xa sihlawulisa ifowuni. Ukusukela ngoko yonke into ibonisa ukuba ingxaki yenzeka ngalo mzuzu apho silayisha khona isiphelo sethu.
Kwezi ntlobo zeemeko, kungcono ukuba Masizame ukutshaja ifowuni ngetshaja eyahlukileyo. Unobangela wengxaki unokuba kwitshaja ngokwayo. Oku kunokwenzeka ukuba asiyisebenzisi itshaja yefowuni. Kodwa ukuba sibona ukuba ingxaki iyekile ukubakho usebenzisa itshaja eyahlukileyo, sele siyazi ukuba yayiyintoni imvelaphi yengxaki yethu ngoko.
Ingcebiso zihlala zihlala zisebenzisa itshaja yoqobo. Ngokusengqiqweni, usenokuba ulahlekile okanye wophule, ngoko usebenzisa enye Jonga ukuba iyalingana, kwaye ineenkcukacha ezifanayo nezasekuqaleni, kuba kungenjalo inokusinika iingxaki kwifowuni, njengakule meko ukunyuka kweqondo lobushushu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Kutheni ifowuni yakho ye-Android ishushu?